संसारभरी नै एउटा मान्यता छ महिलालाई बुझ्न कठिन हुन्छ । केटीहरु कम बोलेर धेरै कुरा भन्छन् । पुरुषले महिलाका कुरा केवल बोलीबाट मात्र बुझ्न सक्दैनन् । उनीहरुको ब्यवहार पनि बुझ्नु महत्वपूर्ण हुन्छन् । महिलाले यौनिक चाहना पनि शब्दमै ब्यक्त नगर्ने एक अध्यनले देखाएको
निदाइरहेको बेलामा एकपछि अर्को विचार, भावना र संवेदना अचेतनरूपमै मस्तिष्कमा आउनु सपना देख्नु हो । मानव इतिहासमा धेरै प्रयास भए पनि व्यक्तिले किन कुनै किसिमको सपना देख्छ र त्यसको अर्थ के हुन्छ, राम्ररी बुझ्न सकिएको छैन । सपना विभिन्न किसिमका (डरलाग्दो, साहसिक,
बैकबाट ऋण लिनका लागि धरौटी अर्थात् जमानत राख्नुपर्दछ । तर चीनमा एउटा कम्पनीले धरौटीको नाममा कुनै जग्गाजमिन वा गरगहना जस्ता चिज होइन युवतीहरुका नांगा फोटा राख्दछ । यतिमात्र होइन यदि ऋण चुक्ता नगरेमा जुन परिणामको सामना गर्नुपर्दछ, त्यो कल्पना भन्दा पनि बाहिर छ
कति समयसम्म सेक्स गर्ने ?
एजेन्सी । अधिकांश मानिसहरुमा जान्ने इच्छा हुन्छ कि सेक्सलाई कति समय दिने अर्थात एकपटकमा कति मिनेटसम्म सेक्स गर्नुपर्छ ? यसको कारण भनेको सेक्सलाई लिएर थुप्रै मानिसमा शंका हुन्छ । मानिसहरु सोच्छन् कि धेरै समयसम्म सेक्स गर्दा कतै आपत त आइलाग्ने होइन् । तर, यथार्थमा
अचम्म लाग्न सक्छ ।। बिद्यालयमा राम्रो कुरा सिकाउनका लागि आफ्नो छोराछोरी लाई अभिभावकले पठाउँछन् । केहि नयाँ कुरा सिकोस् र राम्रो नराम्रो कुरा छुट्याउन सकोस भनेर अभिभावकले ६ घण्टाको समयका लागि दैनिक बिद्यालय पठाउने गरेको त हामी देखेका नै छौं । तर आज तपाईलाई
सेक्स गर्ने निश्चित समय छैन । उपयुक्त समय र परिस्थिति अनुसार सेक्स गर्न सकिन्छ । अधिकांशले रातिमा सेक्स गर्छन् । तर, रातिमा भन्दा विहानको समयमा सेक्स गर्दा बढि राम्रो हुन्छ । एकाविहानै सेक्स गरे दिनभरी ‘मुड फ्रेस’ हुन्छ । अरु यस्ता कारण पनि छन्, जसले तपाईंलाई
पहिले पहिले मानिसहरु परेवा खुट्टामा चिठी बाँधेर खबर आदान प्रदान गर्थे । अहिले परेवाको त्यो ठाउँ मोबाइल, मेसेज तथा ह्वाट्सएपले लिएको छ । तर अहिले यो पनि मानिसहरुका लागि दिक्क लाग्दो हुन थालिसकेछ । त्यहीँ भएर होला मानिसहरु आफ्नो सन्देश पठाउनका लागि नयाँ तरिकाको
एजेन्सी । यौन जीवनका बारेमा विभिन्न अध्ययनहरु हुने गर्छन् । ती अध्ययनबाट यौनका बारेमा नयाँ नयाँ कुरा पत्ता लाग्छ । भर्खरै गरिएको एक अध्ययनबाट युवतीलाई कसरी यौन सम्पर्क राख्नका लागि राजी बनाउने भन्ने बारेमा पत्ता लागेको छ । सम्भोग सुरु गर्नु अघि यौन उत्तेजना
म २७ वर्षीय अविवाहित पुरुष हुँ । यौन सम्बन्धमा रुचि भए पनि अध्ययनमा व्यस्त हुनुपर्ने भएका कारण मेरी गर्लफ्रेन्ड पनि छैनन्, तर हप्ताको एक–दुई पटकजस्तो स्वप्नदोष हुन्छ । सपनामा आफूले चिनेका अनि नचिनेका महिलासँग यौनसम्पर्क भएको देख्छु । भोलिपल्ट सपनाका कारण मनमा
मानिसको विर्यबाट बनाइँदैछ खानेकुरा
सुन्दैमा अनौठो तथा अपत्यारिलो लाग्ने । तर यो दुनियामा असम्भव भन्ने केही रहेनछ क्यारे । हुँदा हुँदा अब मानव विर्यबाट समेत खानेकुरा बनाउन थालिएको छ । बेलायतको लण्डनमा हालैका दिनहरुमा मानिसहरुमा मानव विर्य मिश्रित परिकारहरु बनाउने नयाँ क्रेज बढेको छ । लण्डनमा
दुनियामा अनेकथरी रेष्टुरेन्ट छन् । कोही निकै अनौठा छन् । कसैमा ट्वाइलेट सिटमा बसेर खाना खाने प्रबन्ध छ भने कहीँ ग्राहकहरुले निर्वस्त्र मानिसको जिउमाथि राखिएका खानेकुरा खान पाउँछन् । कुनै रेष्टुरेन्टमा चाहीँ केवल निर्वस्त्र मानिसलाई मात्र प्रवेश दिइन्छ ।
यसरी प्रहरीको निद हराम गर्छन् विदेशी
महिलाको वक्षस्थल विरुद्ध कस्ता कस्ता कानून ?
दुनियाभर केही यस्ता देशहरु प्नि छन् जहाँ महिलाहरुलाई थरीथरीका बन्देज लगाइएका छन् । के तपाइँले यस्तो देशका बारेमा सुन्नुभएको छ जहाँ महिलाहरुको वक्षस्थलमाथि पनि विभिन्न खाले प्रतिबन्ध लगाइएको छ ? यद्यपि कतिपय पूराना कानूनहरु अहिले कार्यान्वयनमा नहुन सक्छन् र
महिलाहरूलाई पुरुष मिलनको रहर कुन बेला अधिक हुन्छ ? एउटा अध्ययनका अनुसार, महिनावारी पूरा भएको पाँचौंदेखि सातौं दिनसम्म । यो अवधिमा महिलालाई सहवासमा बढी आनन्द आउँछ । जर्मनीको युनिभर्सिटी अफ बेम्बर्गनका अनुसन्धाताहरू एक हजार युवा र युवतीमा सर्वेक्षणपछि उपयुक्त
वैवाहिक जीवनमा पति–पत्नीबीच समय समयमा स्वस्थ्य यौनसम्वन्ध आवश्यक छ भन्ने मान्यता छ । नेपाली समाजमा यौनबारे भरसक कुरा गर्न नचाहने प्रवृति बढी छ । व्यक्तिअनुसार यौनबारे ज्यादै महत्वपूर्ण, आवश्यक, केटाकेटी जन्माउनको लागि मात्र भएपनि आवश्यक वा नभै नहुने कुरा
कार्तिक २४, दुरा समुदायको लोपोन्मुख संस्कृति जगेर्ना गर्न नयाँ पुस्ताले चासो देखाउन थालेका छन् । सरोकारवालाले प्रशंसा गरेका छन् ।चन्द्रेश्वर–३, चन्द्रपाटा (च्यानपाटा) स्थित खजे दुरा स्मृति पार्कमा आयोजित ४१ औं खजे दुरा स्मृति दिवस अवसरमा दुरा जातिमा प्रचलित
स्वस्थ खाना खाने हाम्रो शरीर र छालामा रहेका कोषिकाहरू पुरानो भएर मर्ने र नयाँ उत्पन्न हुने क्रम जारी रहिरहने गर्छ । नयाँ कोषिका बढी सिर्जना भयो भने छालाको चमक कायम रहन्छ । तसर्थ, छालामा चाउरी नपरोस् भन्नका लागि स्वस्थ र ताजा खाना खाने गर्नुपर्छ, जसले नयाँ कोषिका
​ टेलिभिजनमा काम गरेर करोडभन्दा बढी पारिश्रमिक लिने कलाकार
कात्तिक ७ ,काठमाडौं । सलमान खानले बिगबोसको चौथौ सिजनदेखि लगातार दशौँ सिजनसम्म होस्ट गरिरहेका छन् । बिगबोस सिजन १० सञ्चालन गरेबापत उनले ६ देखि ८ करोडसम्म पारिश्रमिक लिइरहेका छन् । सलमानले बिगबोस अघि टेलिभिजन शो दसकादम पनि होस्ट गरेका थिए ।
कार्तिक १, काठमाण्डौं । अस्पतालमा उपचारका गराउनका लागि विरामीहरुको भिड लाग्नु स्वभाविकै हो । तर एउटा अस्पताल यस्तो छ जहाँ मानिसहरु उपचार गराउने निहुँमा एकजना डाक्टरसँग भेट गर्नकै लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन् । नगरुन् पनि किन ती डाक्टरले आफु नांगै भएर बिरामीको
संगितकार भट्ट भन्दैछन अनु शाहलाई नांच मैंया नांच
नेपालि सांगितिक बजार तताउन हालै एउटा फरकधारको Dj club mix गित नाच मैया नाच सार्वजनिक भएको छ । बादल थापा र सम्झना मगरको स्वर रहेको उक्त गितमा फरक शैलिको र्याप गरेका छन Mr.Rj ले । गितको शब्द / संगित राजेन्द्र भट्ट (Mr.Rj) ले नै गरेका हुन् । भिडियोमा नायिका अनु शाह संग मोडल प्रकाश
भदौ २९ – आमा बिना पनि बच्चा जन्माउन सकिने सम्भावना रहेको वैज्ञानिकले बताएका छन् । वैज्ञानिकले अण्डा वा डिम्बको साटो छालाको कोषबाट बनाइएको अण्डा वा डिम्बबाट बच्चा जन्माउन सकिने अनुसन्धानबाट देखिएको बताएका छन् । यसले लोप हुने अवस्थामा पुगेका पशुपक्षीको
सलमानसँग फिल्म खेल्न फेरि अस्वीकार
श्रावण ३२ काठमाडौं को होला त्यो हिरोइन, जो बलिउड सुपरस्टार सलमान खानसँग फिल्म खेल्न नचाहोस् । वास्तवमा सलमान खानसँग ‘स्क्रीन शेयर’ गर्ने हरेक अभिनेत्रीको सपना हो । तर बलिउडमा एउटी यस्ती हिरोइन छिन्– जो पटक–पटक सलमान खानलाई अस्वीकार गर्छिन् । हो, उनी अरु कोही
श्रावण २७ काठमाडौं फिल्म ‘कान्छी’ बनाउने गरी बीएस थापा दाइ नेपाल आउनुहुँदा म छ कक्षामा पढ्दै थिएँ । यो २०४१ सालको कुरा हो । सेनामा जागिरे बुबाले पाल्पा तानसेनको पुर्ख्यौली सम्पत्ति बेचेर डिल्लीबजारमा घर बनाउनुभएको थियो । म घरछेउकै कन्या स्कुलमा पढ्थें ।
बिश्वमै सबैभन्दा बढी अश्लिल साइड हेर्ने देशमा नेपाल पहिलाे : कुन देश कति स्थानमा शुचि सहित
नेपालीहरु १३ मिनेट २९ सेकेण्ड सम्म अश्लिल साइटमा काठमाडौं । विश्वप्रसिद्ध अश्लिल चलचित्र सम्बन्धी वेवसाइट पोर्न हवले सन् २०१४ को वार्षिक रिपोर्टमा अनौठो तथ्य सार्वजनिक गरेको छ
विवाहका लागि दुलाहाको अभाव, ७० प्रतिशत युवती अविवाहित
असार ९ सिरिया। सिरियाले त्यहाँ जारी गृहयुद्धका कारण ठूलो क्षति व्यहोर्दै आएको छ । मानवीय र भौतिक संरचनामा मात्र नभई गृहयुद्धका कारण सिरियाले एउटा पुस्ता नै गुमाउने अवस्था निम्तिएको एक अध्ययनले देखाएको छ
जेठ १७ गतेएजेन्सी । भारतमा जारी इण्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट प्रतियोगिता (आईपीएल) आइतबार सम्पन्न भएको छ ।यो प्रतियोगिता सकिएसँगै भारतबाट एउटा अनौठो खबर आएको छ । एक महिनासम्म चलेको प्रतियोगिताभरका विभिन्न खेलमा बाजी राख्दै एक पुरुषले सबै सम्पत्ति सकिएपछि
वैशाख २४ एजेन्सी । एक पुरुषले दुई महिलासँग प्रेम गरेको तथा विहे गरेको सुनिएकै कुरा हो । तर, मध्यप्रदेशको श्योपुर जिल्लामा एकै घरका दुई बहिनीले एकसाथ एकै पुरुषसँग विहे गरेका छन्
वैशाख २५ ,एजेन्सी । तपाईले ऋण तिर्न नसकेको खबर त सुन्नुभएकै होला तर, यस्तो पहिलोपटक भएको छ कि एक व्यक्तिले साहुको पैसा फिर्ता गर्न नसकेपछि आफ्नै श्रीमती र बालबच्चा सुम्पिएका छन् ।घटना भारतस्थित नालन्दा जिल्लाको नारजपुरको गाउँको हो । यहाँका हिमांशु प्रसाद सुमन
काठमाडौं । महिलाहरूलाई पुरुष मिलनको रहर कुन बेला अधिक हुन्छ । एक अध्ययनका अनुसार, महिनावारी पूरा भएको पाँचौंदेखि सातौं दिनसम्म । यो अवधिमा महिलालाई सहवासमा बढी आनन्द आउँछ
बुढेसकालमा फेरि विहे गर्दै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड !
वैशाख १९, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जीवनमा एकपटक फेरि विहे गर्ने भएका छन् ।शनिबार विहान आफ्नै निवास लाजिम्पाटबाट रेडियो कान्तिपुरको कार्यक्रम ‘घुम्ने मेच’को प्रत्यक्ष प्रसारणमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले जीवनमा
यौनइच्छा तीब्र भएपछि यसरी हुन्छ प्रतिस्पर्धा
वैशाख १८ गते बोनोबोन एक साधारण चिम्पान्जीभन्दा सानोखालको वनमान्छे हो । जापानी पशुपन्छी विशेषज्ञ ताकायोसी कानोका अनुसार यो जातको चिम्पान्जी सधैंभरि यौन समागममा व्यस्त हुन्छ
यौन सन्तुष्टिमा भ्रम र सत्य
भ्रम, १. सेक्सका क्रममा महिलाहरु पनि स्खलित हुन्छन् । २. यौन सन्तुष्टिका लागि एकैसमयमा चरमोत्कर्ष आवश्यक हुन्छ । ३. पुरुषको मात्र स्वप्नदोष हुन्छ । ४. स्वप्नदोष यौन समस्याको संकेत हो । ५. कुमारी युवतीसंग सेक्स गरे यौनरोग निको हुन्छ । ६. निरन्तर हस्तमैथुनले लिंग
अश्लिल भिडियो हेर्नेको दिमाग र यौन उत्तेजना घट्ने
एजेन्सी– आजभोलि १३ वर्षदेखि नै किशोर किशोरीले नियमित रुपमा अश्लिल भिडियो र तस्बिर हेर्ने कुलतमा फसेको पाइन्छ । तर, नियमित यस्ता भिडियो हेर्नेको दिमागलाई भिडियोले दिमागमा असर गर्ने गरेको एक नयाँ अध्ययनले खुलासा गरेको हो । अश्लिल भिडियो हेर्नेको दिमागको आकार
युवतीको चाहना कसरी थाहा पाउने.?
युवा होस् वा युवती बढ्दो उमेरसँगै सेक्स गर्ने इच्क्षा जो कोहीलाई पनि लाग्छ । तर अन्य उमेरमा भन्दा युवा अर्थात यौवन उमेरमा सेक्सको इच्क्षा हुनु स्वभाविक पनि हो । प्रेम सम्बन्धमा रहेकै बेला युवायुवतीले छोटो समयमा नै यो सम्बन्ध कायम गरीहाल्छन् । प्रेमसँगै यसलाईअझ
कतिदिन पछि गर्भ रहदैन.? थाहा पाई राखौ ।।
गर्भ रहन धेरै कुराको तालमेल मिल्नुपर्छ । कतिपय स्थितिमा पहिलो वा एक मात्र यौनसम्पर्कमा नै गर्भ रहन्छ, तर सधै यस्तो हुँदैन । यौनसम्पर्क का बेला पुरुषको वीर्यस्लखलन हुँदा निस्किएका करोडौं शुक्रकीटमध्ये केही पाठेघरको मुख हुँदै पाठेघर र त्यसपछि डिम्बबाहिनी नलीमा
नायिका सोनिया सेक्स फिल्ममा काम गर्न तयार
नेपाली चलचित्रमा धेरै नायिका अभिनयका कारण होइन यौन मामिलामा उदार भएका कारण चर्चामा आउने गरेका छन् । त्यही सिलसिलामा जोडिएकी छन् नवनायिका सोनिया केसी, चलचित्र सिलसिलामा उतेजित अधर चुम्बनको दृष्य दिएर चर्चामा आएकी नवनायिका सोनीया त्यसभन्दा बढी निर्देशक
पढाईका साथ साथै पैसा कमाउने सात सजिलो सुत्रहरु
मंसिर २९- मलाई लाग्छ अक्सर सबै जसो कलेजका स्टूडेंट्सहरुले चाहन्छन कि आमा बुवाले पठाएको पैसा भन्दा अरु आफ्नै कमाईको एक्स्ट्रा पैसा भए जीवन धान्न अथवा आफ्नो चाहना पुरा गर्न सहयोग हुन्थ्यो भन्ने सोच्दछन यसो हुँदा आमा
नेपालमा सार्बजनिक भएका चर्चित यौन काण्ड
पूर्व मिस नेपाल जेनिशा मोक्तानको भनिएको भिडियो सार्बजनिक भएपछि सुरु भएको अस्लिल भिडियो सार्बजनिक हुने क्रम बढ्दो छ | Youtube बाहेक सित्तैमा भिडियो upload गर्न मिल्ने विभिन्न साइटहरुमा हिजो आज नेपाली अस्लिल भिडियो प्रसस्त भेट्न सकिन्छ | अरुको देखासिकी गर्ने, कस्तो हुने
जाजरकोट- यहाँको एक जोडीले पाँच रुपैयाँको सिन्दूरमा आफ्नो विवाह सम्पन्न गरेका छन् । खलङ्गा भेरी मालिका–२ तिमिलेका प्रेमवहादुर ओली र रुकुम नुवाकोट–२ की कमल केसी ले रु पाँचको सिन्दूर मात्र किनेर आफ्नो औपचारिक विवाह सम्पन्न भएको घोषणा गरेका हुन् । शुक्रबार बेलुकी
ब्यायामबिनै तौल घटाउने तरिका
छिल्लो समय बढ्दो मोटोपन धेरैका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । व्यस्तताले जिम जाने वा नियमित व्यायाम गर्ने समय पनि मिलाउन हम्मेहम्मे हुन्छ । तर, अब चिन्ता नलिनुस् । अब कार्यालयमा उभिएर काम गर्दा पनि तपाईको वजन घट्ने भएको छ । चेस्टर विश्वविद्यालयका कसर विशेषज्ञ